Sitroka varavarana hotely Sina Hotel Minibar M-25T fanamboarana sy ozinina | AOLGA
Ny Absorption Minibar M-25T dia mametraka refy vaovao amin'ny fampiononana ho an'ny vahiny, fampisehoana vokatra ary fahombiazan'ny angovo. Manasongadina ny teknolojian'i Mdesafe mihinana tsy mitabataba, ny vata fampangatsiahana mini-kilasy 25 l dia mangina tanteraka amin'ny asany sy ara-toekarena ihany koa. Ny varavarany fitaratra sy ny jiro anatiny LED dia manome accent tsara ny tolotra minibar hanamafisana ny varotrao. Fanatsarana tsy azo atao: tantanana varavarana, hidiny, fametahana sisiny havia, fanaraha-maso fanokafana varavarana LED.
Fomba fampangatsiahana: teknolojia fanapoahana, faribolana rano amoniaka
1.Minibar no iray amin'ireo vokatra izay sariaka amin'ny tontolo iainana, tsy misy fluorine, ary tsy miteraka fandotoana ny aérosfera. Fahombiazana avo lenta miaraka amin'ny haitao vaovao mihosotra avo lenta sy ny fihenan'ny amoniaka.
2.Minibar dia tsy misy compressor, tsy misy mpankafy, tsy misy ampahany mihetsika, tsy misy Freon, tsy misy hovitrovitra, mangina ary tsy mamoaka tabataba, miasa mafy sy milamina. Ny vokatra dia afaka mihintsana amin'ny automotra ary ao anaty vata fampangatsiahana miangona.
3.Ny vokatra dia mandray fifehezana ny mari-pana elektronika, izay mahatonga ny mari-pana amin'ny vokatra.
4.Miorina tsara, ary miovaova kely rehefa manomboka sy mihidy.
5.Ny savily varavarana amin'ny vokatra dia azo avadika sy ankavanana sy havanana.
6. Fandidiana tsy misy fikojakojana, fitsitsiana angovo, fiainana lava ary fiantohana 5 taona.
1.Mivoha ankavia na ankavanana
2. Color (Mainty, fotsy, sns)
3.Fidirana mafy na varavarana fitaratra
4.Printy mpanjifa pirinty
5.Power plug karazana, Ohatra, karazana Espana, karazana New Zealand, karazana USA, karazana Europe sns.
6. Miaraka hidy
7.AC na DC
8.Ny lambam-baravarana dia azo namboarina mba hihaona amin'ny fitehirizana manokana
Efitra fandraisam-bahiny, birao, hopitaly na trano sns.
Fampiasana torolàlana momba ny fisotroana hotely Mini bar:
1. Azafady mba avelao ny vokatra hiasa adiny 1 tsy misy enta-mavesatra, ary avy eo apetraka ao anaty sakafo raha vao voalohany mampiasa ilay vokatra.
2. Ny vokatra dia hijoro mitsivalana ary tsy azo esorina; raha tsy izany dia hiteraka hatsiaka tsy fahampiana.
3. Misy toerana 5 tanteraka ao amin'ny fitaovana fanitsiana mari-pana, mazàna azafady mba ampiasao ny toerany Position 1 no mafana indrindra raha ny toerana 5 no mangatsiatsiaka indrindra.
4. Aza asiana sakafo be loatra ao anaty kabinetra indray mandeha, azafady ampio tsikelikely ny sakafo.
5. Ny elanelana sasany dia tazonina eo anelanelan'ny sakafo voatahiry ao anaty kabine, mba hahafahan'ny rivotra mangatsiaka hikoriana malalaka ary hitovy ny mari-pana.
6. Mba hitsitsiana angovo dia mba andramo ny tsara indrindra vitanao mba hampihenana ny ora fisokafan'ny varavarana ary ataovy haingana koa isaky ny manokatra varavarana ianao.
7. Rehefa mijanona tsy hampiasa dia azafady mampiasa lamba malefaka mando hanadiovana ny ao anaty vatam-paty, ary avelao ny rivotra hivezivezy ao anaty goba mba hialana amin'ny famotehana ny valin'ny goba.
8. Jiro LED, 3.6V / 1W.
Lock tsy azo atao
Rafitra mangatsiaka fanosotra
TOSIKARATRA / Frequency
220-240V (110V tsy voatery) / 50-60Hz
4-12（Amin'ny 25℃ Ambient）
Teo aloha: Hitroka hotely Minibar M-25A
Manaraka: Hitroka hotely Minibar M-30A
vata fampangatsiahana zava-pisotro
vata fampangatsiahana varavarana fitaratra
minitra varavarana fitaratra
Vata fampangatsiahana hotely
Minibar miaraka amin'ny Lock
Hiditra hotely Glass Door ...